ညီလင်းသစ်: စိတ်၏ချည်တိုင် နိုင်ငံကလေးသို့ (၃)
Posted by ညီလင်းသစ် au 19.11.13
Nice to see all in one post, food and friends. Should name it F&F.
don't know why the first comment cannot came up.
Nice to see all in one post as food and friends, should name the post as F&F.
အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုဖြစ်စေ ဘလော့ဂါတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်ဖြစ်စေ ဖတ်သူတို့ ထင်ထင်ရှားရှား မြင်သာအောင် ပီပီပြင်ပြင် စိတ်ဝင်တစားရေးတတ်တဲ့ မောင်ညီလင်းရဲ့ ပို့စ်လေးတွေဖတ်မိတိုင်း စိတ်ကြည်နူးမိတာအမှန်ပါ။ ခရီးထွက်တာများနေလို့ ပို့စ်တွေလွတ်ကုန်တယ်ကွယ်။
မြင်းခွာရွက်သုပ်ရယ် ချဉ်ပေါင်ကြော်ရယ် ကို ပိုပြီး အကြိုက်ဆုံး..
ပြီးတော့ ဘလော့မောင်နှမတွေနဲ့ တွေ့ပြီး ညစာစားပွဲလေးအကြောင်းရေးထားတာ မျက်လုံးထဲ တစ်ကယ့်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ယောင်မိတယ်.။
ဒီတစ်ခေါက်ပြန်ဖို့ ဟိုတယ်ကို ဖုန်းဆက်တာ အရင်က တစ်ည 30000 လောက်ဟိုတယ်က 80000 ပြောလိုပြော .. ပိုက်ဆံနှမြောလို့ သူငယ်ချင်းအိမ်ပဲ သွားအိပ်မယ် စဉ်းစားတယ် ... :)
ပန်းဆိုးတန်းကမ်းနားက ဘဲလေး ကိုလည်း ပြန်တိုင်း မပျက်မကွက် ၂ည ၃ညလောက်တော့ ရောက်တုန်းပါပဲ။
ကလောအကြောင်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့် စောင့်ဖတ်မည် ဖြစ်ပါကြောင်းဗျား ... အခုထိ မြန်မာပြည်ထဲက မရောက်ဖူးတဲ့ မြို့တွေထဲမှာ အဲဒီမြို့ပါတယ်.. အစ်ကို့စာတွေထဲကတဆင့် ရောက်ဖူးတော့မှာပေါ့ :)
ကိုညီလင်းသစ်ကို တွေ့ဖူးချင်ပါတယ် ဂစ်တာတီးတတ်တဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေပဲ မြင်ဖူးလို့ :)
It's true that the hotel prices are jumping up enormously though the services offer are not good enough. There are many tourists who keen to flock to Myanmar but when they found out the accommodation price, they step backward and left out from their list. Recently,acouple of two Australians paid AUD 5,000-6,000 for 10 days package trip in Myanmar. For others who couldn't afford that much, they end up going other South East Asian countries like Thai, Vietnam and Cambodia. With above amount, travellers can visit to3or4Asian countries or even to Europe. The travel and tourism affairs of our country should have to take note of it if they want to keep tourists coming in.
As and always, your voyage post gives the same taste to readers with smile and joys.
အဲ့ဒီညနေခင်းလေးကိုတောင် တကယ့်ကို ပြန်လွမ်းသွားရတယ်..
တစ်ဦးချင်းစီကို အလေးအနက်ထားပြီး ရေးထားပေးတာ ကြည်နူးစရာ...။ လေးဆယ်ကျော် မြသွေးနီကို
နုတယ်လို့ ပြောခံရတော့ ပုထုစဉ်ပီပီ ပီတိတွေဝေဖြာလျှက်..။. နောက်တစ်ကြိမ် ဂျူနီယာဒါတ်ခ်မှာ ထပ်ဆုံကြပါစို့.. :)
မြန်မာပြည်မှာ ပျော်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာပါတယ် ကိုညီ...။
ကလောမြို့ရောက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးရေးမှာကိုလည်း ဖတ်ချင်မိပါတယ်။ (ကျွန်တော် နှစ်ခေါက်တိတိ ရောက်ခဲ့ဖူးလို့ပါ။)
ဒီ နိုဝင်ဘာထဲ ခရီးတွေဆက်တိုက်၊ အလုပ်တွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာနဲ့ ဘလော့ဂ်ကိုတောင် မျက်ခြေပြတ်နေတာရယ်...။
ဖေ့ဘုတ်မှာ အကို တဂ်တာတွေ့မှ မြင်မိတော့တယ်...။
B&B ကို အကို ရိုက်ထားတဲ့ ရှုထောင့်လေး လှတယ်...။
အကို့ မေမေ ချက်ကျွေးတဲ့ဟင်းတွေက ဟိုတယ်စာထက်တောင် လှပကောင်းမွန်နေသေး (နောက်တစ်ခါ သမီးများ ရှယ်ယာ ရမလားလို့ :D )
ကိုယ့် အတွက် စာပိုဒ်ဖတ်ပြီး ပြုံးမိတယ်..။
ဒါဆို အနောက်နိုင်ငံမှဆိုရင် သမီး မျက်နှာငယ်ဘူးပေါ့လေ ဟီးးဟီးး
ကလောသွားတောလား အကြောင်း ဖတ်ချင်တယ် အကို...။
အကို့ ညီမ ဗဲရီးဘီးဇီးနေတာကြောင့် ဖေ့ဘုတ်မှာ လင့်တင်ပေးပါနော်..အဟဲ :D :D :D :D
အစ်ကိုက ညီမလေးကို အဲလိုလေးရေးထားပေးလို့ နောက်တစ်ခါလာလည်ရင် မုန့်ပိုကျွေးမယ်... ဟဟ နောက်တာပါ...အဲလောက်လဲမဟုတ်ပါဘူး...။ ကလောကိုလိုက်လည်ဦးမယ်နော်..။
စာတွေဖတ်ပြီး သိကျွှမ်းနေရတဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေ တွေ့ ဆုံကြတာ ပျော်စရာကြီး...တစ်ယောက်ချင်းစီကို ဂရုတစိုက် ရေးတာလေးကို သဘောကျတာ...အဲဒီအစားအသောက်တွေ မစားရတာ ကြာပြီ...ကလောကို လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်တုန်းက တက္ကသိုလ်ကလေ့လာရေးခရီးထွက်တုန်းက တစ်ခေါက်ရောက်ဖူးတယ်...ခုတော့ ဘယ်လိုများ ပြောင်းလဲနေပါလိမ့်..
မောင်နှမတစ်တွေနဲ့ ဆုံခဲ့ရတဲ့အကိုရေ... ပျော်စရာကြီးပဲနော် ..:) အချိန်ရောက်ရင် အိမ်ပြန်ချင်တဲ့ ရောဂါကလည်း မသေးဘူးပဲအကိုရေ... အားကျလိုက်တာ.. ပြန်ဦးမယ် နောက်နှစ်မှ ..:D:D
ကိုညီ့စာလေးတွေဖတ်ပြီး ဘလော့ဂါတွေနဲ့ တ၀ိုင်းတည်း လိုက်စားရသလို ခံစားမိပြီး တစ်ယောက်ခြင်းစီနဲ့ ကိုယ့်ကို မိတ်ဆက်ပေးသလိုလေးဖြစ်နေသေးတော့ သူတို့နဲ့တောင် ခင် လို့...။အားလုံးထဲမှာ အမေ့လက်ရာ ချဉ်ပေါင်ကြော် မြင်းခွာရွက်သုပ် အကြိုက်ဆုံး။ကလောကို အမ အတော်သဘောကျတာ၊မြန်မာပြည်မှာ အကြိုက်ဆုံးမြို့ပဲ။အရမ်းနေလို့ကောင်းတယ်။ကိုညီတို့နဲ့ နောက်ပို့စ်မှာ ထပ်ရောက်အုံးမယ်။ ပျော်စရာ။စောင့်နေမယ်ဗျို့။ကလောပိုစ့်။
စိတ်ဝင်စားစရာ ကလောမြို.ကို လိုက်လည်မယ်နော်။
ရိုးရာမပျက် ချဉ်ပေါင်ကြော်ပန်းကန်တွေ.တော. ဒီကလဲ ထုံးစံမပျက် အကြာကြီး စိုက်ကြည်.မိကြောင်းပါ။ မြင်းခွာရွက်သုတ်ကိုရောဘဲပေါ.။
အစားအသောက်ပုံဆို စိတ်ကြီးတယ်၊ တခြားအကြောင်းအရာတွေထက်စိတ်ဝင်စားတယ် ဒါဘဲ။
ရန်ကုန်မှာ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်တာ၊ အစားအသောက်တွေကအစ ဈေးတက်ကုန်တာ ကြောက်ခမန်းလိလိဘဲ။ ပိုက်ဆံတသိန်းအုပ်တအုပ်ဆိုတာများ ရွှတ်ခနဲ ရွှတ်ခနဲ ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းမသိလိုက်ဘူး။ ငါးထောင်တန်တွေပေါ်လာတော. တသိန်းအုပ်ဆိုတာလဲ ပါးပါးလေး။
B&B အကြောင်းရေးရင်းကနေ F&F ပါ ဖြစ်သွားပုံရတယ်ဗျ..၊း)
ညီဟာ နာမည်ပေး ဝါသနာပါသူ တစ်ယောက်ဆိုတာ တဖြေးဖြေးနဲ့တော့ သိလာရပြီ…၊းD
ကျေးဇူးပါ တီတင့်ရေ..၊ ခရီးက ပြန်လာမှ အေးအေးဆေးဆေး လာဖတ်လေ တီတင့်..၊ ပို့စ်တွေကို သပ်သပ်ဖယ်ထားပေးမယ်..၊းD
ဒါဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ အကြိုက်ချင်းတူနေပြီဗျ..၊း) စာလာဖတ်တဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးနော်..၊
အဲဒါအကောင်းဆုံးပဲဗျ..၊ ပိုက်ဆံကုန် သက်သာတာပေါ့၊း) ကလောကိုလည်း လိုက်ခဲ့ဗျာ..၊ အရမ်းအေးချမ်းပြီး ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ မြို့လေးဗျ…၊း)
အခုတလော မတွေ့မိလို့ ကျနော်တောင် သတိရနေမိ သေးတယ်၊ အဲ.. ကျနော့်ပုံတွေထဲမှာ ကြည့်ပျော်ရှုပျော် ဖြစ်မယ့် တစ်ပုံတစ်လေးများ ရှိမလားလို့ ရှာကြည့်ဦးမယ်ဗျာ၊း)
I totally agree with what you said. There arealot of tourists who wanna come and experience our uniqueness and authenticity which they can't see often elsewhere. Most of my friends work in tourism and the whole industry knows what's going on. But, it's still beyond their control. I saw many hotel construction sites and consequently, prices should go down again in about3years maximum. Thanks for your comment and sharing your point of view!
တကယ့်ကို မြင်တဲ့အတိုင်း ပြောတာပါ အစ်မရဲ့…၊း) အဟဲ.. ဒီတစ်ခေါက် ဂျူနီယာဒတ်ခ် သွားရင်တော့ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော် ၂ ပွဲဆင့်ပြီး စားပစ်မယ်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း များများနဲ့…၊းD
ကပ်လွဲသွားတယ် ဆိုတော့ ညီမက ဘယ်တုန်းက ပြန်ဖြစ်တာလဲ? ဒါမှမဟုတ် သွားဖို့ တာစူနေတုန်းလား…?
ကိုဏီနဲ့ ဆုံဖြစ်ရင် ဒီ့ထက်တောင် ဝမ်းသာစရာ ကောင်းခဲ့မှာဗျ၊း) ရန်ကုန်မှာ မဆုံဖြစ်ပေမယ့် ကလောကိုတော့ အတူသာ လိုက်ခဲ့တော့ဗျာ…၊း)
အမေ့လက်ရာကို ရှယ်ယာ ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ခါ ဖိတ်ကျွေးမယ်လေ၊း) ညီမက အနောက်နိုင်ငံမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ မြန်မာပြည်မှာလည်း ထင်ရှားကျော်ကြားပြီး လူချစ်လူခင် ပေါများပြီးသားပါလေ…၊း)
ဒါဆိုရင် Bar Boon Cafe မှာ လိုက်ကျွေး…၊ အခုတစ်ခေါက်က ကပ်လွဲသွားလို့…၊း)
အာရှစာတွေက ဥရောပမှာထက်စာရင် ညီမတို့ဆီမှာတောင် ပိုပြီး ပေါဦးမယ်ထင်တယ်၊ မရဘူးလား…? ကလောကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က သိခဲ့တာဆိုတော့ အခုအနေအထားက ပြောင်းလဲနေမှာ သေချာတယ်ဗျ…၊
ဟော… ပြန်ပေါ်လာပြီ၊ ပျောက်နေတာ ကြာပြီရော…၊း) အဆင်ပြေရင် ပြန်သာပြန် ညီမရေ…၊
အဟုတ်ပဲဗျ..၊ သူတို့အားလုံးက သိပ်ခင်ဖို့ကောင်းတာ…၊ ရင်းနှီးလွယ်ကြသလို ဟင်းပွဲတွေ မှာတာလည်း အများကြီး…၊းD ကျနော်လည်း ကလောမြို့ကို အရမ်းသဘောကျတယ်ဗျ..၊
ဟုတ်.. အဆင်ပြေမယ့်ပုံတွေ တင်ပေးပါ့မယ်နော်..၊ ရှေ့လာမယ့် ပို့စ်ကို စိတ်ဝင်တစား ရှိလို့လည်း ကျေးဇူးပါ…၊
အစားအသောက်ကို တခြားအကြောင်းအရာတွေထက် စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုတာတော့ သဘောကျသွားပြီဗျို့..၊းD ဟုတ်ပါတယ်လေ၊ လူ့ရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက် ၃ ပါးမှာ အစားက၊ အဝတ်နဲ့ နေရာထိုင်ခင်းထက် အရင်ကို လာတာပဲကိုး..၊း) ဟုတ်ပါ့ဗျား..၊ ကျနော်တို့ခေတ်က တစ်သိန်းက အမေတို့ခေတ်က တစ်ရာလောက်တောင် အသုံးမခံလှဘူး..။
It sounds so much fun Ko Nyi :))
ဘလော့မောင်နှမတွေနဲ့ဆုံတွေ့ရတကိုပဲ ပျော်စရကောင်းလှပါတယ်......ဘယ်ဟင်းဘယ်လောက်ပဲကောင်းနေပါစေအမေရဲ့ လက်ရာအကောင်းဆုံကိုတော့တကယ်ယုံကြည်တယ် ငပိည်တို့စရာတွေမြင်လိုက်တော့ ထမင်းတောင်ဆာနေပြီကိုညီလင်းရေ
မြန်မာပြန်ပြီး ငပိမစားရရင် အဓိပ္ပါယ်မရှိသလိုဘဲနော်
ပစ်လည်း ပြန်ရင် ဘာတွေမကောင်းဘူးပြောပြော
မြန်မာထမင်းဝိုင်းစစ်စစ် ကိုဘဲစားချင်တာ အကိုရ
ဟင်းပွဲတွေ အားပါးတရ ကြည့်လိုက်ရတာ ဗိုက်ကိုဆာလောင်လာတာပဲ... နန်းသီတာက ဆိုင်လည်း သဘောကျပါတယ်.. B&B လည်း သဘောကျတယ်
ဒီပို့စ်ကို တင်တင်ချင်းကတည်းက တွေ့ပြီး ဖတ်ပြီး ကွန်မန့်ရေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာ … အဲဒီတုန်းက အပေါ်မှာ မန့်ထားတာ ၂ ယောက်လားပဲ ရှိသေးတာ။ မအားလို့ ခဏနေမှ ရေးမယ်လဲ ဆိုရော ကွန်နက်ရှင်က မကောင်းတော့ဘူး။ ခုတော့ ကွန်မန့်ပေါင်း ၂၄ ခုအပြင် ပို့စ်အသစ်တွေတောင် ၂ ပုဒ်ထပ်တက်နေပြီ။
“မမေပါးက သနပ်ခါးက နေညိုချိန်ရောက်တော့ ပျက်ပြီပေါ့ရှင့် ။
နံ့သာပြယ်လွင့် ပြီပေါ့ကွယ် … လို့” ကွန်မန့်ရေးမလို့ဟာ နောက်ကျသွားပြီမို့ ရေးတော့ပါဘူးနော်။ :)